Xakamaynta luminta on autopilot leh addons
Xakamaynta luminta on autopilot leh addons 1 sano 3 bilood ka hor #1382
Iyadoo 90% ah addon Diyaaraddii aan soo dejiyey oo aan rakibay, dhammaantood waxay galaan meel istaag ah oo duulimaad leh inta lagu guda jiro duullimaadka gacanta.
Miyuu qof kale leeyahay waayo-aragnimadan?
Waxay iiga leexisaa lowska
Xakamaynta luminta on autopilot leh addons 1 sano 3 bilood ka hor #1383
Tani waa 100% sababtoo ah qalabaynta jadwalkaaga
Fadlan si sax ah u calamee, arintaadana waa la go'aamin doonaa.
Xakamaynta luminta on autopilot leh addons 1 sano 3 bilood ka hor #1384
Haa - waad ku mahadsan tahay taas.
Waxaan dib u cusbooneysiiyay jadwalkayga, laakiin ma lahan wax saameyn ah - wax isku mid ah ayaa dhaca.
Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay arrin aad u adag, waxay dhacdaa marka dijitaalku ku socdo autopilot iyo joystick waa mid aan waxba tarayn. Laakiin isku day inaad si degdeg ah uga soo kabato A / P off ma shaqeyso.
Sidoo kale weligeed kuma dhici doonto diyaaradda caadiga ah ee la socota FSX-SE.
Ma jiri karaa isku dhac cfg faylka ah?
Waxaan ku daray darajada dhawaaqyada dhawaaqa ah ee B737-800 iyo taas oo sababtay isla dhibaatadaas. Nadiifinta qaabka iyo dib u noqoshada caadiga ah.
Waa wax laga xumaado in aan la isticmaali karin addons maadaama ay bixiyaan howlo badan oo dheeri ah.
Ma bixin kartaa sharaxaad dheeraad ah fadlan? Thanks
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.232